အဘယ်ကြောင့်အေးသောရာသီဥတုကြောင့်သင်ဤကဲ့သို့သောဝေဒနာခံစားရသနည်း ဤတွင် S.A.D (ရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသောရောဂါ) ကျော်ရဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။ - သတင်း
ရာသီဥတုအေးတာကမင်းကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စေတာလဲ။ ဤတွင် S.A.D (ရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသောရောဂါ) ကျော်ရဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။
ဒါဟာနောက်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်ပဲ။ ရာသီဥတုသည်သုညသုညအပူချိန်သို့ကျဆင်းသွားပြီး puffer ဂျာကင်အင်္ကျီများပြတ်သွားသည်။ ခရစ်စမတ်၏အဆုံးသတ်အရောင်းဆိုင်များသည်နှစ်လအတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Michael Bubléသည်သူ၏နွေရာသီငိုက်မျဉ်းမှရေခဲမှေးမှိန်နေသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို buzz နေသော်လည်း, သင် shit ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။
တကယ်တော့ဒါကပိုဆိုးတယ်။ သင်ဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းရုံသာမကအောက်တိုဘာလကုန်မှာ Crimbo သစ်ပင်ကိုစိုက်ခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ Tesco Express မှ Elaine ကိုထိုးနှက်ချင်တယ်၊ တကယ်တော့ Superdrug ထဲကိုဝင်လာပြီး Merry ရဲ့အဆိုးဆုံးမျက်နှာဖုံးပါတဲ့ခရစ်စမတ်သီချင်းစာရင်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ခရစ္စမတ်လူတိုင်းထာဝရကာလနှင့်တူသောအရာများအတွက်ကွင်းဆက်ပေါ်တွင်။
အဆိုပါကြောင်နှင့်မိန်းမ meme ရှိရာကနေလာခဲ့ကြ
- Melanie (@storyshapedgirl) နိုဝင်ဘာ 14, 2017
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရ 'ရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရောဂါ' သည်စိတ်ရောဂါခံစားမှုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်တစ်နှစ်တာလုံးပုံမှန်စိတ်ကျန်းမာရေးရှိသူများသည်ဆောင်းရာသီတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများပြလေ့ရှိသည် '
ဒီတော့စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းရူးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါတကယ့်အရာပါ ပြီးတော့သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ပြီ။
စိတ်ပညာရှင်၏အဆိုအရ S.A.D သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ melatonin အဆင့်များနှင့်လုပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ညနေခင်းစော။ မှောင်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် melatonin ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြောင်းအလဲနှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရာသီများကိုအပြစ်တင်နိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Zoella သည်စျေးကြီးလွန်းသော confetti နှင့် shitty cookie cutters များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောပြက္ခဒိန်အတွက်ပေါင် ၅၀ အားသွင်းနေခြင်းအပေါ်အလွန်အမင်းဒေါသထွက်ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဒါမှမဟုတ်သူကဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ)
သို့သော် Crimbo 2017 ကိုမစွန့်လွှတ်ပါနှင့်။
စိတ်ရောဂါပညာရှင်များသည် S.A.D. သို့ Fuck You ကြီးကြီးမားမားကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိခြင်းသည် S.A.D ကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းရွှေရောင်ရောင်ခြည်များကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်အသုံးချခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်နေ့လည်စာတွင်လမ်းလျှောက်လျှင်ပင်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်သည်။
ယနေ့လိဒ်စ်တွင်အေးစိမ့်သောဆောင်း ဦး ရာသီဖြစ်ပြီးသင်ကျောင်းဝင်းထဲ၌ရောက်နေလျှင်လှလှပပဖြစ်နေသည် စိန့်ဂျော့ဂ်ျ၏အင်ဂျင်နီယာအဆောက်အအုံနှင့်အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ သင်ဆင်ခြေဆင်လက်တစ်ခုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဒါပါ။ ? ?? #leedsinautumn #leedsuniversity #leedsuni #universityofleeds #uniofleeds #unileeds #heartleedsuni #leedslife #leedsthroughalens #discoverleeds #leeds #igersleeds #lookupleeds #leedsviews #leedsloveleeds #leedsleedsleeds #leedswelcome #leedsarchit # #
Leeds တက္ကသိုလ် (@universityofleeds) မှနိုဝင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၇ နံနက် ၃:၅၉ အချိန်တွင်ဝေမျှခဲ့သည်
သင်လုပ်ချင်တာကချောကလက်လိမ္မော်နဲ့အဖျော်ယမကာစားပြီးအိပ်ရာဝင်တာကိုပြောတာကအလွယ်တကူပြောတာကပိုလွယ်ပေမဲ့၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက S.A.D. မှစတင်ခံစားနေရပြီလို့ထင်ရင်အကျိုးရှိစေနိုင်တယ်။
Kickboxing လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ ထိုအအေးခဲခြင်းနှင့်အအေးအရာခပ်သိမ်းထဲက shit ကန်?
နောက်တဖန်ဤအမှုကိုပြုသောထက်ကပြောသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အထူးသဖြင့် Tesco သည်လွန်ခဲ့သော ၂ လကျော်ကသူတို့၏ Snow Bites နှင့်အခြားခရစ်စမတ်မီးခိုးမြူများဝယ်ယူခဲ့သည်။
ကိုယ့် Cadbury snowbites Omg ငါ့ကို 46 နောက်ထပ် pack ကိုပေး OMG လုံလောက်စွာမရနိုင်ပါ
- jess (@jesspIease) အောက်တိုဘာလ 21, 2017
လာမည့်ခရစ္စမတ်နေ့ရက်များကိုမရှောင်လွှဲနိုင်ခြင်းသည်သင်၏ပခုံးပေါ်၌ကြီးမားသောအလေးချိန်ရှိသကဲ့သို့ခံစားနိုင်သော်လည်းသင်၏ပညာရေးကိုမင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုထားရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်ရဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲနည်းပြဆရာဘယ်လောက်ပဲကိစ္စကိုသင်ထဲကထွက် shit ကြောက်လန့်။
ငါတေလာဆွစ်ဖ်အင်ပါယာကို ၀ ယ်ပြီးသူမရဲ့အယ်လ်ဘမ်အသစ်မှာပေါင် ၁၀.၉၉ သုံးစွဲခဲ့တယ်။
အခြားလူတိုင်းအချိန်ကောင်းကောင်းရနေပုံရသောအချိန်သည်ဆောင်းရာသီတွင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားရခြင်းသည်အမှန်ပင်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ မင်း သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးအကူအညီဖြစ်နိုင်သည်။
101 လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များကို Pinterest တွင်သိမ်းဆည်းပါ။ သို့မဟုတ်အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့်အုပ်စုလိုက်စကားပြောပါ။ သင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စိတ်အားထက်သန်သောဓါတ်ပုံများကိုသာပို့ပေးပါ။
S.A.D ယူတာပဲ။ သို့သော်သတိရပါ၊ ငါအနုပညာရှင်တစ် ဦး သည်ညစဉ်ညတိုင်းသုံးပတ်ကြာသည်။ ခရစ္စမတ်နေ့၌သင်သည်မနက် ၁၀ နာရီတွင်စတင်သောက်သုံးနိုင်သည်။ အားလုံးကောင်းတယ်။
Samaritans helpline ကိုသင်ခေါ်ဆိုနိုင်သည် 116 123 အခမဲ့ဖြစ်သော ၂၄/၇ ရက်၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်ဖြစ်သည်။